Original lesikhumba cala nge ukuvulwa mpo cover Isikhumba Flip Shell for BlackBerry 9320 / 9220 Curve — Everything for BlackBerry. InfoResheniya / bbry.net
Izesekeli nezingxenye zokungcebeleka zeBlackBerry‎ → ‎Izesekeli kanye izingxenye ezisele BlackBerry 9320 / 9220 Curve ‎ → ‎
Original lesikhumba cala nge ukuvulwa mpo cover Isikhumba Flip Shell for BlackBerry 9320 / 9220 Curve
العربية	বাংলা	Deutsch	English	Español	Français	हिन्दी	Bahasa Indonesia	日本語	中文
I yasakazwa Ukuvikelwa kungenzeka BlackBerry yakho kuzo zonke izinhlobo yokulimala. design Laconic ibhizinisi isitayela, ukuthungwa emnandi.
Original lesikhumba cala nge ukuvulwa mpo cover Isikhumba Flip Shell for BlackBerry 9320 / 9220 Curve kakhulu thembeke ukuvikela BlackBerry yakho kuzo zonke umonakalo: uhlevane, imihuzuko, ukungcola, uthuli umswakama.
Ngaphakathi the cover idluliselwe a skeleton plastic, ukuze ifoni itholakala, futhi Ubuye kuyisivikelo esiqinile. Kukhona amathuba zonke izimbobo, izinkinobho, ikhamera, okwenza kube lula ukufinyelela kuzo. izicubu zomzimba ezithambile ngaphakathi esembozweni aqede ukubukeka imihuzuko kanye imihuzuko esibukweni uma usebenzisa cover. ukunakekela okukhethekile wafihla zip ekhaveni okuvela phezulu; kuba ngesimo hook ebanzi kokubili lula ngendlela emangalisayo ukuyisebenzisa futhi enokwethenjelwa. I lid angavulwa kwelinye motion, futhi ukufinyelela screen kanye ikhibhodi ivuliwe: ungakwazi ukusebenza ifoni yakho ngaphandle kokukhipha ikhava.
Isikhumba Flip Shell isekela magnetic umsebenzi BlackBerry: ngaphakathi kwesembozo has a inzwa magnetic okuyinto kwabangela ngokushesha njengoba uphela, futhi inikeza Vala isikrini backlight futhi ikhiphedi Ilokhi, ngaleyo ndlela lokulondoloza amandla webhethri. Ngokushesha nje lapho uvula isivalo, smartphone esitshalweni aphinde.
Original lesikhumba cala nge ukuvulwa mpo cover Isikhumba Flip Shell for BlackBerry 9320 / Ijika 9220 has a design sleek, ukuthungwa emnandi futhi imigqa abushelelezi. Leli cala uphelele for isitayela ibhizinisi.
Materials and fabric: genuine leather, plastic, steel
Product type: Case and its accessories → Vertical flip case
Original lesikhumba cala nge ukuvulwa mpo cover Isikhumba Flip Shell for BlackBerry 9320 / 9220 Curve, Black (Black) ACC-46594-301 (HDW-46593-001) ●
Original lesikhumba cala nge ukuvulwa mpo cover Isikhumba Flip Shell for BlackBerry 9320 / 9220 Curve, White (mbala omhlophe) ACC-46594-302 (HDW-46593-002) ●
Black (Black) ACC-46594-301 (HDW-46593-001)
White (mbala omhlophe) ACC-46594-302 (HDW-46593-002)